Umonakalo wesikhumba wefungal isifo esingathandeki kakhulu, okungekho lula ukususa kuso. Indlela yokubhekana ne-mycosis kanye ne-fungus - isilonda esikhumba esingathandeki, ngingawagwema?
Umuntu uhlangana nabamele "umbuso wesithathu wemvelo" - amakhowe - yonke indawo. Zifana nezidalwa zasemhlabeni njengezitshalo nezilwane.
Kodwa amakhowe akuwona kuphela ama-boletus ne-russula! I-stain of isikhunta eshizi, imvubelo yokubhaka, ihlamba emva kokuluma kwemiyane - akukho ndawo ekhona ngaphandle kwayo. Amafungulu adiliza futhi ahlukanise izinsalela zezitshalo nezilwane, ahlanganyele ekwakheni izinto eziphilayo emhlabathini, ukwandisa ukuzala kwawo. Kuzo, ama-enzyme namavithamini atholakala, kanye nama-antibiotic. Amakhowe adingekayo embonini yokudla ekukhiqizeni iwayini, ubhiya, i-kvass, ebhakheni. I-penicillin yokuqala ye-antibiotic iphinde ibe umkhiqizo wokuphila kwesinye isikhunta. Kodwa kukhona nezinye izifungi - izilonda zesikhumba ezingajabulisi. Masikhulume ngabo.
Baye yonke indawo
Amakhowe ahlala emzimbeni womuntu, ebizwa ngokuthi isikhunta. Imfucumfucu ewusizo idinga nje kithi. Ezinye zazo zihlala esikhumbeni, zenza imisebenzi eminingi futhi zithuthukise izindawo zokuvikela zalezi zinsuku; abanye bahlala emathunjini, futhi bahlanganyele ohlelweni lokugaya; owesithathu uhlala emlonyeni; owesine ... Kodwa ziphi?
Kodwa kukhona i-fungus - isilonda lesikhumba esingathandeki, esibangela izinkinga eziningi, njengoba kubangela i-mycosis yesikhumba, isikhumba sekhanda, nezipikili. Ngaphandle kwesihlungi esinjalo - izilonda zesikhumba ezingavamile, awukwazi nje ukuzenza ngaphandle kwazo - kungcono kakhulu ukuhlala ngaphandle kwazo.
Isibonelo, i-pityriasis yindawo emincane ejikelezayo yombala omhlophe noma obomvu entanyeni, emahlombe, esifubeni noma emuva. Kodwa izigxobo ezigqinsiwe, ezibumnyama, ezigubhayo ezingalweni nasemilenzeni zikhombisa i-onychomycosis, futhi ngesiteji esinganaki. Izipikili ezinjengezinwele ezinjengezikhumba azikwazi ukufihla ngisho nangaphansi koqweqwe oluqinile lwe-varnish. Kukhona futhi i-mycosis inguinal, izifo ze-fungal zomzimba womlomo nezitho zangasese.
Isihambeli esivela kwi-sandbox
I-susceptible mostly to the spores of the fungus yizilonda ezinganelisayo zesikhumba zezingane. I-kid ingakwazi "ukuthatha" i-herpes hhayi nje lapho ikhuluma nesilwane, kodwa nasesitokisini noma echibini lapho isilwane esigulayo sishiya ubuso bayo noma siphunga. Uma uthola indawo esolisayo esikhunjeni somntwana, ungazitholi imithi - ungayihlanza ngesandla sokuqala esiza ngaphansi kwengalo. Lokhu "kungafihleka" isithombe sangempela, esiyinkimbinkimbi kakhulu ekuhloleni.
I-Microsporia (lichen) i-dermatologist inganquma ngokubonakalayo. Kodwa kuyoba okulungile uma udokotela ehlwanyela ukuhlwanyela futhi uyithumele esifundweni se-laboratory. Khumbula ukuthi ama-laboratories ale phrofayli kuphela ezikhungo ezikhethekile ze-dermatological. Ukwelashwa kunqunywe kuye ngohlobo lwe-fungus kanye nobukhulu besilonda. Uma kuphela isikhumba sithintekile, khona-ke kukhona izindlela zangaphandle ezanele. Ezimweni lapho kutholakala khona ukulimala kwezinwele zezinwele (ringworm), isiguli sinqunyelwe amalungiselelo akhethekile. Ungazibandakanyi nemithi yokwelashwa - ukuze ukwazi ukushayela lesi sifo sibe ifomu elingapheli, bese ususa inkinga kuyoba nzima nakakhulu.
Ukuze anqobe ngokuphelele i-mycosis eqalisiwe kungathatha izinyanga eziyi-1.5 zokwelashwa esibhedlela. Ukusetshenziswa kwama-antibiotic antifungal kudinga ukunakekelwa okuqinile kwezokwelapha. I-nail therapy ye-fungus inehlelo layo. Isikhathi sokwelashwa sincike esiteji sesifo. Phela, i-fungus - i-lesion yesikhumba esingajabulisi ibangelwa kuphela ezinganeni nasebancane, kodwa nakubantu abadala.
Umsebenzi ophezulu we-fungi ubangelwa ikakhulukazi ukuwohloka kwesimo sezinto eziphilayo kanye nokungcola kwe-fungal yemvelo yangaphandle nangaphakathi. Ukwelashwa okunciphise, ukucindezeleka nokwenyuka ngokomzimba, intshiseko enkulu ngokwemithi yama-antibiotics nama-hormone - konke lokhu kusezandleni zefungi eliyingozi. I-onychomycosis, evame ukutholakala kubantu abadala, itholakala ngisho nasezinganeni ngemuva kokusebenzisa imithi elwa namagciwane. Ngemuva kokwelashwa kwama-antibiotic, kunomngcipheko we-candidiasis wepheshana lomzimba.
Eqenjini eliyingozi le sifo, i-fungus iyisilonda lesikhumba esingathandeki, kukhona njalo intsha kanye nabantu abasha. Ngokujwayelekile "abangezezi" ngokuphumula okufanele nokudla okunempilo, futhi ukugqoka njalo izicathulo zezemidlalo (izitebe, izitebe) kudala indawo enhle yokuthuthukiswa kwezinyawo. Okokuqala kukhona ukuphahlazeka, isikhumba esikhanyayo phakathi kweminwe, bese kubomvu, kukhona ukushaywa. Kancane kancane, indawo ye-lesion iyanda, iyahamba ezipikili. "Ukutholakala" nokutheleleka kwe-fungal kungenzeka ku-salon zokugqoka izinwele, amahhovisi e-cosmetic and massage, okugeza, ama-saunas namahholo wezemidlalo.
Imithetho elula kodwa ebalulekile
Umthetho oyinhloko wokuvimbela ukutheleleka kwefungal ukuhlanzeka ngokuphelele. Akudingekile ukuhamba usuku lonke emasakeni, kodwa, njengokunye kwezicathulo zokwenziwa. Esikhathini sauna, sauna, echibini lokubhukuda, thatha ama-slippers enjoloba nethawula. Ungasebenzisi ama-slippers omunye wabantu, ogwini, ukhanyisa kuphela emathini, ungahambi ngezicathulo ezingasesihlabathini noma amatshe amatshe. Ngenye indlela indlela esebenzayo yokuphila ngokuphumula okugcwele. Futhi ungasebenzisi kabi amaswidi namakhekhe - amakhowe abulawe kabi!
Ngezibonakaliso zokuqala zesifo, funa usizo ku-dermatologist. Ngaphezu kwalokho, esiteji sokuqala, ungaqeda izinkinga "zamakhowe" ezinsukwini ezingu-10-20.
Isidakamizwa esiqine kakhulu singase singabi nalutho uma le fungus engaziwa. Kungatholakala kuphela ngokuhlolwa okukhethekile kwamabarabhu.
Izidakamizwa kanye nemithi yokwelashwa
Harm and benefit of ovens microwave
Izakhiwo eziwusizo ze-turmeric
Ngingazi kanjani ukuthi nginezinkukhu?
Ukudla okuphezulu ku-vitamin E
Izindlela zomphakathi zokushisa amafutha esiswini
I-Pie "Ubuhlalu" ku-multivark
Ukushayela nge-sinardon custard
I-Millet iphalishi emhluzeni
Recipe "I-soup-puree ye-zucchini"
I-Pepper ebhakawe ngamakhambi kanye noshizi
Izakhiwo eziwusizo zerayisi yaseJapan